पैसा नहुँदा ५ महिनादेखि फलामे साङ्लोमा ! - Everest Dainik - News from Nepal
पैसा नहुँदा ५ महिनादेखि फलामे साङ्लोमा !
धनकुटा, भदौ १६ । दुवै हातखुट्टा फलामे सांग्लाले खम्बामा बाँधेर पशुलाई झैँ राखिएको छ । लाउँलाउँ खाउँखाउँ उमेरमा उनको कष्टकर दैनिकी देख्नेलाई पीडा बोध हुन्छ । आर्थिक अभावमा उपचारबाट वञ्चित २१ वर्षीय युवकको अवस्था विगत ५ महिनादेखि कष्टकर बन्दै गएको छ ।
धनकुटा नगरपालिका-१० मार्गाका मोहन श्रेष्ठ धामीझाँक्रीको भर पर्दा हाल उनी फलामे सांग्लाको बन्धनमा परेका छन्। सुरुमा मानसिक असन्तुलनको लक्षण देखा परेपछि उनलाई धामिझाँक्रीबाट झारफुक गरिएको उनका बाबु पहलमानले बताए।
‘निको पारिदिने भन्दै धामीझाँक्रीले धेरै खर्च गरिदिए’, उनले भने, ‘तर बीसको उन्नाइस नभएपछि ढिलो गरेर अस्पताल पुर्याए पनि उपचार खर्च अभावमा घरैमा ल्याएर बाँधेर राखेको हो।’ धामीझाँक्रीबाट झारफुक गराउँदा ऋण काढेर जुटाएको ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएपछि अस्पतालमा उपचार गराउने रकम अभाव भएको उनले दुःखेसो पोखे।
त्यसपछि टेलिभिजन फुटाउने, घरको ढोकाझ्याल नै तोडफोड गर्ने, कपडा च्यात्नेलगायत गतिविधि गर्न थालेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा सांग्लाले बाँधिएको उनले जनाए। ‘उसको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न हाम्रो केही लागेन,’ उनले थपे, ‘छाडा छोडा जनधनकै असुरक्षा ठानेर बाँध्नुपरेको हो।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।
ट्याग्स: Dhankutaa, Falame sangalo, धनकुटा नगरपालिका-१०